Tsuki ga Kirei ( 2017 ) - Myanmar Asian TV
Tsuki ga Kirei ( 2017 )
English Title – As The Moon So Beautiful
Japanese romance anime လေးတွေကိုကြိုက်တဲ့သူတွေ
အတွက် 2017ထွက် animeကားကောင်းလေးပါ
စုစုပေါင်း၁၂ပိုင်းပါရှိပြီး … IMDb rating မှာလည်း 8/10 တောင်ရထားတာဆိုတော့ ကြည့်သင့်နေပြီနော် …
စာသစ်နှစ်တစ်ခုရဲ့အစကျောင်းဖွင့်ရက်မှာ စာရေးဆရာဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေသူ Kotarou Azumi နဲ့ ပြေးခုန်ပစ်အဖွဲ့က အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Akane Mizuno တို့ဟာစာသင်ခန်းတစ်ခန်းထဲမှာ အတူတူကျ ကြပါတယ် …
မမျှော်လင့်တဲ့ တလွဲတချော်ပြသနာလေးတွေကပဲ သူတို့နှစ်ယောက်ကိုတဖြည်းဖြည်းနီးစပ်သွားစေပါတယ် …
တစ်ရက်မှာ အရမ်းကိုလှပတဲ့လပြည့်ညတစ်ညမှာ နှစ်ယောက်သားအတူတူထိုင်နေကြရင်း Kotarou က Akane ကိုတောင်းဆိုလိုက်တဲ့မေးခွန်းလေးတစ်ခုကပဲ သူတို့နှစ်ယောက်ကြားကတိတ်ဆိတ်နေတဲ့ ခံစားချက်တွေကိုပြောင်းလဲသွားစေပါတယ် …
ရိုးရှင်းလှတဲ့သူတို့ရဲ့ ချစ်ခြင်းရဲ့ကြားမှာ ဘယ်သူတွေဝင်ရောက်နှောင့်ယှက်ကြမလဲ ?
ဘယ်လိုကံကြမ္မာတွေက သူတို့ကြားမှာ ဘယ်လိုသဘောထားကွဲလွဲခြင်းတွေ ပေးမှာပါလိမ့်?
Drama ချစ်သူတွေအတွက်ကတော့ ဇာတ်လမ်းကောင်းလေးဖြစ်ပါတယ် …
ဇာတ်လမ်းကအေးအေးလေးနဲ့ နောက်ဆုံး episodes တွေမှာမှ ဇာတ်ရှိန်မြင့်သွားတာပါ …
Translator : Ero Sennin (LA)
Encoder : Kaung Min Sett
File size : around 200MB
Episode 01 : Openload Episode 01 : SolidDrive
Episode 02 : Openload Episode 02 : SolidDrive
Episode 03 : Openload Episode 03 : SolidDrive
Episode 04 : Openload Episode 04 : SolidDrive
Episode 05 : Openload Episode 05 : SolidDrive
Episode 06 : Openload Episode 06 : SolidDrive
Episode 07 : Openload Episode 07 : SolidDrive
Episode 08 : Openload Episode 08 : SolidDrive
Episode 09 : Openload Episode 09 : SolidDrive
Episode 10 : Openload Episode 10 : SolidDrive
Episode 11 : Openload Episode 11 : SolidDrive
Episode 12 : Openload Episode 12 : SolidDrive
Director: Yuuko Kakihara
Networks: BS11, MBS TV, Tokyo MX
Starring: Atsushi Tamaru, Kikuko Inoue, Kohara Konomi, Rie Murakawa, Shouya Chiba,
Mint To Be ( 2018 )
sec sem ကနီးနေပြီဆိုတော့ လုပ်မယ် မလုပ်ဘူး ဆိုပြီး တိုင်ပတ်နေတာ ပြီးတော့မှ Krist ကို support လုပ်ပေးနိုင်တာက ဒီတစ်ခုပဲ ရှိတာဆိုတော့ ကိုယ်လုပ်လိုက်မိတယ် ကိုယ်ပြီးအောင်တော့ လုပ်ပေးမှာပါ ok??? Krist ကို နက်နက်ရှိင်းရှိင်း သိတာဆိုလို့ ကိုယ်တို့ အသိုင်းအဝိုင်းပဲ ရှိတာလေ အဲဒါကြောင့် တခြားသူတွေကလည်း ဒီကားကို ကြည့်ရင်းနဲ့ Krist…
2018 ခုနှစ်မှာ Season 1 ထွက်ရှိထားတဲ့ Eng Series လေး တစ်ခုနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ …. အပိုင်း ၁၀ ပိုင်း ပါဝင်ပြီး AMC Network မှ ထုတ်လွှင့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် … 2007 ခုနှစ်က ရောင်းအားအကောင်းဆုံး novel တစ်ခုဖြစ်တဲ့ The Terror ဆိုတဲ့ ဝတ္ထုကို အခြေခံပြီး…
Colourful Bone ( 2017 )
Myanmar Asian TV ပရိသတ်တွေအတွက် တရုတ်ဇာတ်လမ်းတွဲကောင်းလေးတစ်ခုနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ …. Colourful Bone လို့ အမည်ရပြီး 2017 December မှာ ထွက်ရှိခဲ့တယ့် ဇာတ်ကားလေးတစ်ကားပါ … မျက်နှာ သွင်ပြင် တစ်ခု ကူးပြောင်းခြင်း ဟာ မသေချာမရေရာမှုတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေတက်ပါတယ် … ဒီ အသွင်ကူးပြောင်းတဲ့ ဒဏ္ဌာရီလာ ပညာရပ် တစ်ခုက…
Genre: Fantasy, Historical, Romance, Suspense, Wuxia
Devilish Joy ( 2018 )
Devilish Joy ဆိုတဲ့ drama အသစ်လေးကို စက်တင်ဘာလ ၅ရက်နေ့မှာ စလွှင့်မှာဖြစ်ပြီး အပတ်စဉ် ဗုဒ္ဓဟူးနဲ့ကြာသပတေး ကိုရီးယားစံတော်ချိန် ည ၁၁ နာရီမှာ ထုတ်လွှင့်ပြသမှာ ဖြစ်ပါတယ်….. ဇာတ်လမ်းပုံစံလေးက…. ကားအက်စီးဒင့်ကြောင့် မှတ်ဥာဏ်တွေ ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ ဦးဏှောက်နဲ့ အာရုံကြောဆရာဝန်လေးနဲ့ တစ်ခေတ်တစ်ခါက နာမည်ကျော်မင်းသမီးဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ မိန်းကလေးတို့ရဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်……. တစ်နေ့တာဖြစ်ပျက်ခဲ့သမျှကို မှတ်စုထဲမှာ ချရေးထားရပြီး…
Accidentally in Love ( 2018 )
Admin တွေ Translator တွေရဲ့ အချစ်ရေးက အေးအေးဆေးဆေးနွေးနွေးထွေးထွေးဖြစ်တော့ ကိုယ်တွေဘဝနဲ့ အသားကျတဲ့ လူငယ်ဆန်ဆန် Romance Chinese Ongoing Mini Series လေးတစ်ခုနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးမယ်နော် … လူငယ်ဆန်ဆန်ဆိုတော့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ ရီကာမောကာ ကြည့်လို့ရတာပေါ့ … Mini Series သာခေါ်တာ အပိုင်းက 32 ပိုင်းတည်းပါ :3 နောက်တစ်ခုက…
The King2Hearts ( 2012 )
ဒီတခါတော့ လေဒီတို့အသည်းကျော်မျောက်(အိုဂုံ)လေးကို အလွမ်းပြေကြည့်ဖို့ အိုဂုံ ရဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲ အဟောင်းလေးတစ်ကားနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ် …… ဒီဇာတ်လမ်းတွဲလေးကို၂၀၁၂ မှာ MBC ရုပ်သံလိုင်းက လွှင့်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး IMDb Rating 8/10 ရထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေး ဖြစ်ပါတယ် … ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကတော့ – ဘုရင်လုံးဝမဖြစ်ချင်၊ ကိုယ့်အတွက်ကိုယ်သာသိတတ်၊ ဖြတ်ထိုးဥာဏ်လည်းအင်မတန်ကောင်းတဲ့ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ အိမ်ရှေ့စံမင်းသား လီဂျယ်ဟာ (ယူတို့ရဲ့အိုဂုံလေး/Lee…